Sweden: Hooyo ku eedeysan dilka gabadheeda oo 3 sano jir aheyd. - NorSom News
Sweden: Hooyo ku eedeysan dilka gabadheeda oo 3 sano jir aheyd.
Sida ay qorayaan warbaahinta dalka Sweden, hooyo u dhalatay dalka Sweden ayaa ku eedeysan dilka gabadheeda oo sadex sano jir aheyd, kaas oo dhacay bishii January ee sanadkan.
Xeer ilaalinta dowlada ayaa sheegtay in dilka gabadha loo adeegsaday alwaax lagu garaacay oo dhaawac ka gaarsiiyay qeybo kamid ah madaxa, dhabarka, gacanta midig iyo labada lugood. Sidoo kale gabadha sadex sano jirka ah ee geeriyootay ayaa la siiyay daroogo, taas oo ah qeyb ka aheyd sababta keentay geerideeda.
Hooyada gabadha oo hada xiran ayaa sidoo kale ku eedeysan inay jirdil u geysatay walaalaha gabadha geeriyootay.
Dilka gabadhan ayaa aad looga hadalhayaa warbaahinta Sweden, kadib markii wargeyska Dagens Nyheter uu ka qoray maqaal xanbaarsan warbixino argagax leh.
Gabadha geeriyootay ayaa markii ay yareyd waxey waalidkeeda korinteeda u sharciyeeyeen qoys kale, balse markii ay gaartay 2 sano ayay waalidkeedii dhalay mar kale codsadeen in loogu soo wareejiyo korinteeda.
Aabaha gabadha la dilay ayaa sidoo kale ku eedeysnaa inuu qeyb ka qaatay dilka gabadha, balse bishii February ayuu ku dhex dhintay xabsiga uu ku xirnaa.
Xigasho/kilde: Mor tiltalt for drap på sin tre år gamle datter i Sverige
Previous articleGiriiga oo Norway ka diiday inay qaabilaan 946 qoxooti ah oo dalkaas farro ku leh.
Next articleGermany: Hadii aad calan dal gubto: Sadex sano oo xabsi ah.
Bergen: Aabe loo xiray dhaawac kama´ ah, oo uu ilmihiisa gaarsiiyay.
Iido: Waxaa soomaalinimo darteed la iigu cunsuriyeeyay wareysi shaqo farmashiye.
Bergen: Sawiradii nabiga lagu aflagaadeeyay oo masaajid lagu dhajiyay
Keydka NorSom Velg måned oktober 2020 (76) september 2020 (54) august 2020 (82) juli 2020 (54) juni 2020 (69) mai 2020 (83) april 2020 (68) mars 2020 (130) februar 2020 (69) januar 2020 (84) desember 2019 (22) november 2019 (71) oktober 2019 (54) september 2019 (50) august 2019 (96) juli 2019 (77) juni 2019 (78) mai 2019 (79) april 2019 (40) mars 2019 (64) februar 2019 (61) januar 2019 (40) desember 2018 (25) november 2018 (52) oktober 2018 (33) september 2018 (44) august 2018 (33) juli 2018 (28) juni 2018 (28) mai 2018 (39) april 2018 (41) mars 2018 (55) februar 2018 (36) januar 2018 (85) desember 2017 (83) november 2017 (105) oktober 2017 (119) september 2017 (112) august 2017 (110) juli 2017 (125) juni 2017 (115) mai 2017 (122) april 2017 (108) mars 2017 (137) februar 2017 (114) januar 2017 (106) desember 2016 (98) november 2016 (101) oktober 2016 (83) september 2016 (44) august 2016 (44) juli 2016 (28) juni 2016 (44) mai 2016 (24) april 2016 (25) mars 2016 (1)